Ukubhloga ngeshishini | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 9, 2010 NgeCawa, Oktobha 19, 2014 Douglas Karr
Ukuba ubungekho kwi Ingqungquthela yeWebtrends Engama-2010, uphoswe yinkomfa yobukrelekrele kwishishini. Ukuzibandakanya akufani nayo nayiphi na enye inkomfa yenkampani ebendikhe ndaya kuyo. Injongo kukubonelela abathengi kunye neengcali zeshishini ngokuchasana nezinye zeengcali ezigqwesileyo neziqaqambileyo kulo lonke ushishino lwe-Intanethi. Bhalisela unyaka olandelayo Zibandakanye eSan Francisco -Basoloko bethengisa!
Kulo nyaka ndimenyiwe ukuba ndenze i-sprint, i-10 yemizuzu yamandla malunga nento ehambelana nokuthengisa kwi-Intanethi kwaye ndiyayithanda. Ndithathe isigqibo sokwenza eyam kwi urhwebo inbound (cofa kuyo ukuba awuyiboni iprizenteyishini). ENew Orleans, ndithethe ngokukodwa malunga neshishini kwintengiso yeshishini, kodwa ezona ndlela zilungileyo zisebenza kushishino kwintengiso yabathengi ngokunjalo.
Inkcazo-ntetho yantlandlolo yahlukile okwahlukileyo kwaye yayolulwe kakuhle kwiscreen seenyawo ezingama-80 emva kwam… kodwa nantsi inyama yayo!
Ewe, ukuba ubuseNew Orleans, ufumane inyhweba yokwenene… ndiyenzile intetho yam ndaza ndathelekisa iMedia Media kunye nokuvela komdaniso. Nditsho ndaphosa amanyathelo ambalwa ndaye ndahleka. Kwakulixesha elimnandi macala onke!
Nalu uluhlu lomxholo wesilayidi:
Amaqhinga okuthengisa angenayo
Umxholo onyanzelayo yinto evelisa utshintsho. Umxholo omkhulu yindibaniselwano yokusetyenziswa kwamagama aphambili kunye nomxholo ophendula umbuzo weendwendwe? kwaye ibakhuthaza kwinqanaba elilandelayo kwinkqubo yokuthengisa. Ibhlog yakho ilungiselelwe iinjini zokukhangela.
Emuva ngemini, ukuThengisa kunye nokuThengisa yayingumthombo wolwazi ngamathemba. Amathemba axhomekeke kubo.
Ngoku iiinjini zokuKhangela zihlala zibonelela ngolwazi olufunwa ngamathemba.
Imidiya yokuncokola ngoku ichaphazela ukukhangela kunye nefuthe kuthathwa isigqibo. Ithemba ngoku lifumana ulwazi kwiiNjini zokuKhangela nakwiNethiwekhi yabo yoLuntu.
Ukuba amaqela akho okuThengisa kunye noThengiso afuna ukubandakanyeka ekuthathweni kwezigqibo kwithemba, kufuneka babekhokele kukhangelo kwaye babandakanyeke kunxibelelwano lwasentlalweni. Ngaba ayisayi kuphinda ilinde inkampani ukuba ibe nethemba?
Kufuneka ube kuyo yonke indawo!
Ukusebenzisa ukuhlangana kunye nezinye izixhobo zokudibanisa kunokugcina ixesha kwaye kukugcine ngaphambili apho ufuna ukuba khona!
Ukongeza, zikho ezinye izixhobo kwimarike yokwenza lula iimfuno zakho zokudityaniswa.
Yonke iposti yebhlog enye kufuneka ibe nendlela yokuzibandakanya. Ngokwesiqhelo, le yifowuni yesenzo, kwiphepha lokufika, kuguquko!
Umthengi uhlala kwindawo yakho yebhlog, kwaye ubona umnxeba ofanelekileyo kwisenzo. Oko kubiza isenzo kuya kubakhokelela kwiphepha lokufika kunye nakwifaneli yokuguqula.
Uninzi lwabantu alufundi. Phinda: uninzi lwabantu alwenziwanga? FUNDA! Sebenzisa indawo emhlophe ngokufanelekileyo, uphawule ngemifanekiso kwaye ungeze ividiyo kunye nesandi. Yondla izivamvo: ezibonwayo, ezivakalayo, i-kinesthetic.
Ukhuphelo, imisitho, imibuzo kunye neempendulo, ii-imeyile, ii-Whitepapers, amabhaso? Zonke ezi zikhetho kufuneka zifuna ifom yedatha ukuqokelela ulwazi oluphambili. Ibhlog yakho isimahla? thengisa yonke enye into ngedatha!
Yakha amaphepha anyanzelayo okufika athatha isixa esincinci sedatha kwaye eqinisekisa ulwalathiso. Yenze ibe lula. Lo ngumzekelo obalaseleyo ovela Isihlomelo.
Linganisa indlela ezifika ngayo izikhokelo zakho? Ngokudibanisa, imithombo yeendaba kwezentlalo, iileta zeendaba ze-imeyile, iminyhadala, njl. njl. Oku kuyakuvumela ukuba ufumane apho kufanelekileyo ukuba utyale ixesha elininzi!
Bukela imimandla ekubhekiswa kuyo, misela iinjongo, kwaye ujonge ukuguqulwa kwemijelo yakho!
Mna? M Douglas Karr (I-Twitter: @iqosweb), Ukuba ufuna uncedo, nxibelelana nam ku Highbridge.
Owu… kwaye ndinokongeza ukuba ndivule nge-poke emnandi ukusuka e-Indianapolis ukuya eNew Orleans ngokubhekisele kwiSuper Bowl. Akufuneki ukuba ukubikezela kwam kwahamba kakubi kwindawo ethile kwikota ye-4 kwaye abalandeli be-Saints bandixelele ngeCawa ebusuku!
tags: kubloga kwishishinikubloga kw seokubloga kwequmrhuBa ndakanyeurhwebo inboundSEOwebtrends bayazibandakanya
Yiba nokuzingca malunga neNethiwekhi engazinikeliyo